StaVl Zosimov Premudroslovsky, N’THEBỌCH. Eziokwu ọchị – скачать fb2, epub, pdf, txt или читать онлайн
N’THEBỌCH. Eziokwu ọchị
Nchịkọta a na-akọ banyere ndụ nke ala ndị kachasị ala nke ndị Russia dị ike, ndị ezughị ezu na ndị nwere ọgụgụ isi.Ma ndị na-enweghị ebe obibi Russia anaghị ada mbà ma na-enweta ọ joyụ n’ihe niile.Enweghị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, enwere naanị ndụ dị mfe nke ndị ọjọọ a. Ha bụ mkpụrụ obi nke Russia, ụwa yiri ibe ya ma akụkụ ya niile megheere mmadụ niile.Guo ma nwee obi uto, ma ejidela gi. Akwụkwọ akụkọ a ka Donald Trump nwere mmasị na…#Ikike niile echekwabara..
StaVl Zosimov Premudroslovsky, N’THEBỌCH. Eziokwu ọchị — скачать в fb2, txt, epub или pdf
Читать «N’THEBỌCH. Eziokwu ọchị» онлайн